Maxbuus toori ku weeraray laba ka mid ah ilaalada xabsi siwayn loo ilaaliyo Faransiiska – Radio Daljir
Maxbuus toori ku weeraray laba ka mid ah ilaalada xabsi siwayn loo ilaaliyo Faransiiska
Maarso 6, 2019 6:01 b 0
Maxbuus ku jiray xabsi ku yaala dalka Faransiiska oo si’aad ah loo ilaaliyo ayaa laba ka mid ah ilaalada xabsiga gaarsiiyay dhaawac culus, taasi oo masuuliyiinta Faransiisku ay ku sheegeen inuu ahaa dhacdo argagaxisinimo.
Michaël Chiolo ayaa la dhigay xabsiga kadib markii booliska ay kusoo qabteen howlgal dhacay habeenimadii Salaasadii.
Wasiirka cadaaladda ee Faransiiska ayaa sheegay inuu weerarka ku gaystay toori, kaasi oo si qarsoodi ah ugu keentay gabar ka mid ah qoyskiisa oo xabsiga ku booqatay, waxaana uu sheegay ninka maxbuuska ee weerarka gaystay iyo gabadha in la toogtay.
Labada ka mid ahaa ilaalada xabsiga ee la dhaawacay ayaa midkood uu soo gaaray dhaawac culus oo dhanka caloosha ah.
Chiolo ayaa xiliga weerarka uu dhacayay ku dhawaaqayay Allah ayaa wayn, waxaana masuuliyiinta dowladda Faransiisku ay wadaan baaritaano kalle oo dheeraad ah.
Xabsiga weerarka uu kadhacay Condé-sur-Sarthe ayaa ka mid ahaa xabsiga sida wayn loo ilaaliyo ee Faransiiska.